पानी र एसिड मा तामा को विलेयता, घुलनशीलता
सबैभन्दा तत्व को रासायनिक गुण को आधार एक जलीय मध्यम र एसिड मा भंग आफ्नो क्षमता छ। सामान्य अवस्थामा कम सक्रिय तामा प्रभाव संग सम्बन्धित विशेषताहरु को अध्ययन। विशेष गरी यसको रासायनिक प्रक्रियाहरु अमोनिया, पारा, नाइट्रिक र यौगिकों को गठन छ सल्फ्युरिक एसिड। पानी कम तामा विलेयता, घुलनशीलता जंग प्रक्रियाहरू कारण सक्षम छैन। एस निहित विशिष्ट रासायनिक गुणहरू, अनुमति गर्न प्रयोग मिश्रित विभिन्न उद्योग।
कपर कसरी मान्छे थप ई.पू. बनाउन सिकेका जो धातु, को पुरानो मानिन्छ। यो सामाग्री अयस्क को रूप मा प्राकृतिक स्रोतबाट तयार छ। कपर-भनिन्छ ल्याटिन नाम तांबा जसको अनुक्रम संख्या, यो चौथो अवधि मा स्थित र पहिलो समूह पर्छ छ 29 बराबर आवधिक प्रणाली मा छ, साथ रासायनिक तत्व तालिका।
प्राकृतिक पदार्थ एक नरम र निंदनीय संरचना संग एक गुलाबी-रातो भारी धातु छ। यसको Boiling र पग्लिने अंक को तापमान - 1000 ° सी यो एक राम्रो सञ्चालकको छ।
रासायनिक संरचना र गुण
तपाईं तामा अणु को विद्युतीय सूत्र जाँच्न भने, यो4स्तर छ पत्ता लगाउन सम्भव छ। को valence 4S-कक्षीय मा केवल एक इलेक्ट्रन छ। समयमा रासायनिक प्रतिक्रिया ऑक्सीकरण +3, +2, +1 13नकारात्मक चार्ज कणहरु, त्यसपछि प्राप्त तामा यौगिकों को अणु देखि cleaved हुन सक्छ। यसलाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो स्थिरता divalent डेरिवेटिव छ।
रासायनिक प्रतिक्रिया, यो धातु एक कम गतिविधि रूपमा कार्य। पानी मा तामा विलेयता, घुलनशीलता को साधारण अवस्थामा हराइरहेको छ। सुक्खा हावा जंग छैन अवलोकन, तर फलाम ओक्साइड को कालो tinge संग लेपित धातु सतह हीटिंग द्वारा छ। तामा को रासायनिक प्रतिरोध जैविक यौगिकों, phenol रेजिन, र अल्कोहल को anhydrous ग्याँसहरु कार्बन नम्बरको कार्य देखाएको छ। यो रंग यौगिकों को रिलीज संग complexation को प्रतिक्रिया द्वारा विशेषता छ। कपर monovalent को डेरिवेटिव एक नम्बर फारम गर्न बाध्य एक क्षार धातु समूहसँग एक कम affinity छ।
विलेयता, घुलनशीलता के हो?
अन्य पदार्थ एक मिश्रित प्रतिक्रिया द्वारा यो प्रक्रिया समाधान को रूप मा homogeneous प्रणाली को गठन को। आफ्नो घटक व्यक्तिगत अणु, परमाणु, आयनों र अन्य कणहरु छन्। विलेयता, घुलनशीलता को डिग्री एक संतृप्त समाधान को तयारी मा भंग भएको थियो जो पदार्थ, को एकाग्रता निर्धारण गरिन्छ।
मापन एकाइ अक्सर प्रतिशतको, मात्रा वा वजन अंश। पानी मा तामा को विलेयता, घुलनशीलता, ठोस रूप जस्तै अन्य यौगिकों मात्र तापमान अवस्थामा परिवर्तन गर्न विषय। यो सम्बन्ध घटता द्वारा व्यक्त गरिएको छ। यदि आंकडा धेरै साना, पदार्थ छ छलफल हुन अघुलनशील।
एक जलीय मध्यम मा तामा को विलेयता, घुलनशीलता
धातु समुद्र को कार्य अन्तर्गत जंग प्रतिरोध प्रदर्शन। यो सामान्य अवस्थामा यसको inertness प्रमाणित गर्छ। पानी (ताजा) मा तामा को विलेयता, घुलनशीलता व्यावहारिक अवलोकन छैन। तर एक भिजेको वातावरण र अन्तर्गत प्रभाव को कार्बन डाइअक्साइड मा धातु सतह हो गठन हरियो टेप जो आधारभूत कार्रोप्नेट:
घन + घन + ओ2+ एच2हे + कं2→ घन (OH)2· CuCO 2।
हामी एक नुन रूपमा यसको monovalent मिश्रित विचार भने, यो आफ्नो थोरै dissolution अवलोकन छ। यस्तो सामाग्री तीव्र ओक्सीकरण अधीनमा छन्। परिणाम एक divalent तामा मिश्रित छ। यी लवण जलीय मिडिया मा राम्रो विलेयता, घुलनशीलता छ। आयनों मा आफ्नो पूर्ण dissociation छ।
एसिड विलेयता, घुलनशीलता
कमजोर वा पतला एसिड संग पारंपरिक प्रतिक्रिया अवस्था percolation तामा आफ्नो अन्तरक्रियामा योगदान छैन। कुनै छ रासायनिक प्रक्रिया alkalis संग धातु। एसिड मा तामा को विलेयता, घुलनशीलता, यदि तिनीहरू बलियो oxidizing एजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यस मामला मा, अन्तरक्रिया ठाउँ लिन्छ।
नाइट्रिक एसिड मा तामा को विलेयता, घुलनशीलता
यो प्रतिक्रिया कारण त्यहाँ बलियो धातु ओक्सीकरण अभिकर्मक छ भन्ने तथ्यलाई गर्न सम्भव छ। नाइट्रिक एसिड एकाग्रचित्त फारममा पतला र तामा को oxidative dissolution संग गुण प्रदर्शन।
पहिलो embodiment छ प्राप्त बेला प्रतिक्रिया तामा नाइट्रेट र bivalent नाइट्रोजन ओक्साइड मा अनुपात 75% 25%। पतला नाइट्रिक एसिड संग प्रक्रिया निम्न समीकरण द्वारा वर्णन गर्न सकिन्छ:
8HNO3+ 3Cu → 3Cu (सं 3)2+ सं + सं + 4H2O.
दोस्रो अवस्थामा, तामाको नाइट्रेट र नाइट्रोजन जसको 1 को अनुपात 1 यो प्रक्रिया धातु को 1 तिल र एकाग्रचित्त नाइट्रिक एसिड को3Moles समावेश divalent र tetravalent आक्साइड। मा dissolution तामा एक बलियो ताप को समाधान, परिणामस्वरूप मा थर्मल अपघटन को oxidant हुन्छ र पुन: प्राप्त अतिरिक्त मात्रा को नाइट्रोजन आक्साइड:
4HNO3+ घन → घन (सं 3)2+ सं2+ सं2+2घन्टा2O.
स्क्रैप वा कोटिंग बर्बाद हटाउने को प्रक्रिया संग सम्बन्धित साना-मात्रा उत्पादन प्रयोग प्रतिक्रिया। तर, तामा dissolving को यस्तो विधि नाइट्रोजन आक्साइड को ठूलो मात्रा को रिलीज संग सम्बन्धित बेफाइदा को एक नम्बर छ। कब्जा वा तिनीहरूलाई neutralize विशेष उपकरण आवश्यक छ। यी प्रक्रियाहरू धेरै महंगा छन्।
त्यहाँ अस्थिर नाइट्रोजन आक्साइड को उत्पादन को पूर्ण समाप्ति हुँदा कपर dissolution पूर्ण मानिन्छ। प्रतिक्रिया तापमान दायरा 60 देखि 70 ° सी मा अर्को चरण समाधान को lowering छ रासायनिक रिएक्टर को। तल प्रतिक्रिया छैन जो धातु को सानो टुक्रा छन्। परिणामस्वरूप तरल पानी थपिएका थिए र निस्पंदन बाहिर छ।
विलेयता, घुलनशीलता मा सल्फ्युरिक एसिड
सामान्यतया यो प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्दैन। सल्फ्युरिक एसिड मा determinant तामा dissolution, यो बलियो एकाग्रता छ। पतला मध्यम धातु oxidize गर्न सक्दैन। एकाग्रचित्त सल्फ्युरिक एसिड मा तामा को Dissolution सल्फेट को रिलीज संग आय।
प्रक्रिया निम्न समीकरण व्यक्त:
घन + एच2अतः4+ एच2अतः4→ CuSO4+2घन्टा2हे + अतः 2।
तामा सल्फेट को गुण
CuSO 4: नुन dibasic पनि यसलाई निर्दिष्ट, सल्फेट भनिन्छ। यो कुनै volatility exhibiting, कुनै पनि विशेषता गंध बिना एक पदार्थ हो। को नुन को anhydrous फारम, कुनै रंग छ यसलाई उच्च hygroscopicity भएको अपारदर्शी छ। तामा (सल्फेट) राम्रो विलेयता, घुलनशीलता मा। पानी अणु, सामेल लवण स्फटिक हाइड्रेट यौगिकों गठन हुन सक्छ। एक उदाहरण हो तामा को सल्फेट, topotecan नीलो छ। यसको सूत्र: CuSO4·5घन्टा2O.
स्फटिक हाइड्रेट निहित bluish रङ्ग पारदर्शी संरचना, तिनीहरूले तीतो, धातु स्वाद प्रदर्शनी। अणु समय आफ्नो संयुक्त पानी गुमाउन सक्छ। प्रकृति मा, जो chalcanthite र butit समावेश खनिज, को रूप मा फेला परेन।
उजागर तामा सल्फेट। विलेयता, घुलनशीलता एक exothermic प्रतिक्रिया हो। गर्मी को एक महत्वपूर्ण राशि hydration लवण को प्रक्रिया मा उत्पन्न भएको छ।
को विलेयता, घुलनशीलता तामा मा फलाम
फे र घन को गठन यो प्रक्रिया pseudoalloys को फलस्वरूप। फलाम र तामा धातु गर्न आपसी विलेयता, घुलनशीलता सीमित गर्न सकिँदैन। यसको मान अधिकतम तापमान सूचक 1099,85 ° सी अवलोकन गर्दै ठोस रूप मा तामा विलेयता, घुलनशीलता को डिग्री 8.5% फलाम बराबर छ। यी साना संकेतक हो। तामा को ठोस रूप मा धातु फलाम को Dissolution बारेमा 4.2% छ।
कोठा मान गर्न तापमान Lowering थोरै आपसी प्रक्रियाहरू बनाउँछ। धातु तामा पग्लियो, यो राम्रो ठोस रूप मा फलाम गीला गर्न सक्षम छ। फे र घन pseudoalloys को तयारी मा विशेष preform प्रयोग गर्नुहोस्। तिनीहरूले थिचेर वा शुद्ध वा मिश्र धातु फारममा फलाम पाउडर वर्तमान पकाना द्वारा बनाईएको हो। यस्तो preform छ गर्भवती संग तरल तामा, निर्मित pseudoalloys।
अमोनिया मा Dissolution
प्रक्रिया अक्सर रातो-तातो धातु अधिक महामण्डल को रूप मा राजमार्ग3पारित गरेर आय। परिणाम अमोनिया मा तामा को dissolution छ, अलग घन3एन यो कम्पाउन्ड रूपमा monovalent nitride उल्लेख छ।
यसको उजागर अमोनिया समाधान को लवण। को तामा क्लोराइड गर्न अभिकर्मक को वाहेक हीड्राकसीड को रूप मा वर्षा निम्त्याउँछ:
CuCl2+ राजमार्ग3+ राजमार्ग3+2घन्टा2हे → 2NH4Cl + घन (OH)2↓।
अतिरिक्त अमोनिया एक जटिल प्रकार मिश्रित एक गाढा-नीलो रंग भएको गठन बढावा:
घन (OH)2↓ + 4NH3→ [घन (राजमार्ग 3) 4] (OH) 2।
यो प्रक्रिया cupric आयनों निर्धारण गर्न प्रयोग भएको छ।
फलाम को विलेयता, घुलनशीलता
अतिरिक्त तत्व को आधारभूत घटक बाहेक pearlitic निंदनीय फलाम संरचना मा एक पारंपरिक तामा को रूप मा वर्तमान छ। अर्थात् यो कार्बन अणुहरु को Graphitization को तरलता, को मिश्र को बल र कठोरता बढ्छ बढ्छ। धातु अन्तिम उत्पादनमा perlite को स्तर मा सकारात्मक प्रभाव छ। फलाम मा तामा को विलेयता, घुलनशीलता प्रारम्भिक संरचना को डोपिंग लागि प्रयोग गरिन्छ। यो प्रक्रियाको मुख्य उद्देश्य निंदनीय मिश्र धातु प्राप्त छ। उहाँले यांत्रिक र जंग गुण सुधार हुनेछ, तर embrittlement कम।
फलाम को तामा सामग्रीको बारेमा 1% छ भने, stretching समयमा बल को दर 40% बराबर छ, र 50% गर्न उपज बढ्छ। यो एकदम को मिश्र धातु को विशेषताहरु परिवर्तन। वृद्धि रकम को धातु dopant 2%, यो सुराकी गर्न परिवर्तन मा बल एक मूल्य 65% र प्रवाह दर बन बराबर 70%। एक उच्च तामा सामग्री मा संरचना को फलाम छ गठन कठिन spheroidal ग्रेफाइट। को alloying तत्व को संरचना परिचय एक viscous र नरम मिश्र धातु निर्मित को प्रविधि परिवर्तन गर्दैन। एक प्रतिक्रिया को अवधि संग एकै समयमा पर्नु गर्न एनिलिंग लागि उपलब्ध समय फलाम को उत्पादन अशुद्धताओं तामा बिना। यसको बारेमा 10 घण्टा छ।
प्रयोग तामा लागि निर्माण को डाली फलाम संग एक उच्च एकाग्रता को सिलिकन छैन सक्षम गर्न पूर्ण निर्मूल तथाकथित फलाम संग्रह मिश्रण बेला एनिलिंग। फलस्वरूप, एक उत्पादन कम लचक भएको।
पारा विलेयता, घुलनशीलता
प्राप्त amalgam धातु पारा अन्य तत्व संग मिश्रित गर्दा। यो प्रक्रिया यस्तो अवस्थामा एक तरल Pb किनभने, कोठा तापमान मा ठाउँ लिन सक्छ। पारा मा तामा को विलेयता, घुलनशीलता मात्र ताप समयमा ठाँउ लिन्छ। धातु पहिलो काट्नु पर्छ। मा गीला तरल पारा ठोस तामा एक आपसी प्रवेश को एक पदार्थ मा अर्को प्रक्रिया वा प्रसार। को विलेयता, घुलनशीलता को मूल्य प्रतिशतको रूपमा व्यक्त र 7.4 * 10 -3 छ। महिनामा प्रतिक्रिया, एक ठोस amalgam को सरल, यस्तै गर्न सिमेन्ट। यो एक सानो गर्मी छ भने, यो softens। फलस्वरूप, यस्तो मिश्रण बरतन को मरम्मत को लागि प्रयोग गरिन्छ। यसलाई मा धातु को सर्वोत्कृष्ट सामग्री एउटा जटिल amalgam पनि छ। उदाहरणका लागि, एक दन्त मिश्र धातु मा तत्व चाँदी, टिन, तामा र जस्ता छन्। 27: 6:2प्रतिशत आफ्नो रकम दुवै 65 बुझाउँछ। यस्तो संरचना भनिन्छ चाँदी संग Amalgams। प्रत्येक मिश्र धातु घटक कार्य एक विशिष्ट समारोह, जो अनुमति दिन्छ गर्न प्राप्त उच्च गुणवत्ता छाप।
अर्को उदाहरण त्यहाँ एक उच्च तामा सामग्री हो जसमा amalgam मिश्र धातु हो। यो पनि तामा मिश्र धातु भनिन्छ। को amalgam को संरचना वर्तमान देखि 10 30% घन छ। तामा को उच्च एकाग्रता धेरै कमजोर र संक्षारक मिश्र धातु चरण गठन गर्दैन संग पारा प्रतिक्रिया देखाएका टिन, रोक्छ। यसबाहेक, मूल्य मा एक कमी मा छाप परिणाममा चाँदी राशि कम। को amalgam तयार गर्न अक्रिय वातावरण वा सुरक्षा तरल एक फिलिम खेल्छ जो प्रयोग गर्न मनमोहक छ। धातु कि बनाउन अप मिश्र धातु सक्षम को तेजी ऑक्सीकरण द्वारा हावा। हाइड्रोजन को उपस्थिति मा ताप प्रक्रिया तांबा amalgam को मौलिक तामा अलग एक पारा आसवन गर्न जान्छ। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, यो मुद्दा सिक्न सजिलो छ। अब तपाईं तामा मात्र होइन पानी संग तर पनि एसिड र अन्य तत्व संग पारस्परिक रूपमा थाहा छ।
विद्यार्थीलाई को लक्ष्य के हो? विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गतिविधि। सिक्ने उद्देश्य
इस्तानबुल (टर्की) को जनसंख्या: शहर को सामान्य विवरण
कसरी अनुसन्धान गर्न र माथि राम्ररी आकर्षित?
"Chondroxide अधिकतम": प्रयोग र प्रतिक्रियाको लागि निर्देशन
एक यांत्रिक काठ मामला मा एक पेंडुलम संग पर्खाल घडी: तस्बिर, ट्युनिङ
तर-Elixir "सपना क्रीम", "काला पर्ल": समीक्षा र विवरण
समूह नाम "Vk": हँसिलो र रु
सबै समय मा स्कर्ट: स्कर्ट सूर्य
स्प्रैट्ली टापुहरू: फोटो, इतिहास, पहिचान, आराम। Spratlys मा लडाई (1988)
Amur - नदी। विशेषताहरु, वर्णन, मोड। नदी तीन अमेरिका
काठ को पूरण - आफ्नो घर को विश्वसनीय सुरक्षा
आफ्नै हातले चिनाई